Kudengenyeka kwenyika kune mikana yekuparadza muPeru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kudengenyeka kwenyika kune mikana yekuparadza muPeru
Kuputsa Kufamba Nhau • Peru Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kudengenyeka kwenyika kunogona kuparadza kuyera 8.0 kwakangozunza Peru panguva 7.41 yeTC. Nekudaro, iko kure kweiyo epic nzvimbo uye nguva yekupedzisira inogona kutamba chinzvimbo mukuderedza kukuvara. Kudengenyeka kwacho kwakanzwika kure nemakiromita mazana matanhatu zvisinei.
Iyo nzvimbo iri kure asi padyo zvakakwana kumaguta anotevera kukonzera kukuvara kukuru uye kukuvara.
80.7 km (50.0 mi) SE yeLagunas, Peru
Lonely Planet inoti vafambi vanouya kuLagunas ine matope, ine humhutu nekuti ndiyo nzvimbo yekutanga yekutora chikamu chekumadokero kweReserva Nacional Pacaya-Samiria. Guta iri nzvimbo yakapararira, nzvimbo iri kure; kune zvitoro, asi stock (yakachipa mutengo pane kumwe kunhu muPeru) ishoma, saka zvine hungwaru kuunza zvako wega zvinhu sekusimudzira. Iko hakuna mari-inoshandura zvivakwa uye hapana chero ruzhinji mafoni kana maresitorendi.
98.4 km (61.0 mi) E yeYurimaguas, Peru
Yurimaguas idhorobha rechiteshi muLoreto Dunhu rekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwePeruvia Amazon. Nhoroondo yakabatana neMaynas, iro guta rine tsika dzakasiyana inozivikanwa nerudo se "Pearl reHuallaga".
158.2 km (98.1 mi) ENE yeLamas, Peru
170.2 km (105.5 mi) N yeContamana, Peru
193.5 km (120.0 mi) E yeMoyobamba, Peru
eTurboNews iri kutevera mamiriro acho. Iyi ndiyo mamiriro ari kusimukira.